Badbaadinta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. – Gedo Times
class="post-template-default single single-post postid-51214 single-format-standard">
Home / Wararka Maanta / Badbaadinta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Badbaadinta Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Waxyaabaha uu ku caanbaxay Madaxweyne Md. Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) waxaa ka mid ah halkudhigga qiimaha badan ee ah “Soomaaliya Soomaali baa leh” oo macnaheedu yahay maamulka, difaacidda, iyo kheyraadka dalka waxaa iska leh, una madaxbanaan go’aankooda, xilna uu ka saaran yahay muwaadiniinta Soomaaliyeed.
Sidey marka ku dhacday in RW Md. Xasan Cali Kheyre uu ku adkaysto in nin u dhashay dalka UK (ama bilcaan Masriyad ah) loo dhiibo hoggaanka Bangiga Dhexe ee Soomaaliya?
Waxaa foolxumo ah in 60 wasiir iyo wasiir ku xigeeno Soomaaliyeed ay madaxa u raariciyeen RW Kheyre oo ka ogolaadeen in la badelo Sharciga Bangiga Dhexe Lambar 130 ee 2011 (waxna laga badelay 4/4/2012), Qodobkiisa 12aad, Farqaddiisa 1aad, Xarafka (a) ee dhigaya in Guddoomiyaha, Guddoomiye Ku Xigeenka, iyo 5ta xubnood oo kale ee Golaha Agaasimayaasha (Board of Directors) ay ahaadaan muwaadiniin Soomaaliyeed.
In ajnabi loo magacaabo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, waxay ku noqon doontaa MW Farmaajo dhacdo foolxun oo baal madow ka gasha taariikhdiisa siyaasadeed. Waxay noqon doontaa dhacdo xun oo aqoonyahanada iyo qurbajoogta Soomaaliyeed ay muddo dheer ka sheekeeyaan.
Waa tan taariikhda Mr. Roberts:
Waxaa dalbaday jagada Guddoomiyaha Bangiga Dhexe oo weliba wareysi shaqo laga qaaday aqoonyahano badan oo Soomaaliyeed oo khibrad u leh maamulka maaliyadda, bangiyada islaamiga ah iyo kuwa cilmaaniga ah. Waa xadgudub weyn in, iyada oo la heli karo Soomaali qaban karta shaqadaas, la badelo sharciga Bangiga Dhexe ee Soomaaliya si loo keeno nin la saaxiib ah RW Kheyre oo ajnabi ah oo aan weligiisna la shaqeyn bangi ku dhaqma shareecada islaamka.
Baaq Ku Socda MW Farmaajo, RW Kheyre, Xildhibaanada Golaha Shacabka, Iyo Xisbiyada Siyaasadeed ee Dalka
Qorshaha xowliga ku socda ee ah in qof ajnabi ah loo magacaabo jagada Guddoomiyaha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya waxay dhaawici doontaa dareenka wadaninimo ee dhalinyarada iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxay hoos u dhigi doontaa kalsoonida ganacsatada Soomaaliyeed iyo in ay maalgashtaan dalka. Waxay ku dhali doontaa qurbajoogta Soomaaliyeed in aysan ku soo degdegin dib ugu soo laabashada dalka.
Mudane RW Kheyre, ka joog ajnabi jacaylka. Ha nooga eexan gaalka saaxiibkaa ah. Ma dhici doonto in aan aqbalno ajnabi Xamar noogu taliya (Mudane ma iloowday Nicholas Haysom?) ama taageerno ama la shaqeeyno ajnabi madax ka ah Bangiga Dhexe.
Mudane MW Farmaajo, waxaad ku caanbaxday oo badankeen aan kugu taageernay difaaca qaranimada iyo sharafta dadka iyo dalka Soomaaliyeed. Md. Madaxweyne, fadlan ka hortag oo gaashaanka u daruur qorshaha guracan ee ah in qof ajnabi ah madax looga dhigo Bangiga Dhexe ee Soomaaliya oo ah bangi ay bulshadu aad u qadariso (kuna caan baxay silsiladdii weyneyd) oo maamuli doona lacagta iyo suuqyada maaliyadda ee Soomaaliya. Mudane Madaxweyne, waxaa jooga rag iyo gabdha Soomaaliyeed oo si hufan uga soo bixi kara hoggaaminta Bangiga Dhexe. Mudane MW, looma baahna, kamana mid ah qodobada deyn cafinta ee SMP in aan qof ajnabi ah gacanta u galino maareeynta howlaha maaliyadda iyo dhaqaalaha dalkeena.
Waxaa soo dhow xilli doorasho ee ha loo eexdo shaqaalaha Bangiga Dhexe, aqoonyahanada, khubarada, xirfadlayaasha, maamulayaasha bangiyada iyo culimada Soomaaliyeed oo yaan loo dhiibin hoggaanka Bangiga Dhexe shaqsi ajnabi ah oo aan weliba muslim aheyn. Bangiga Dhexe waa hey’ad muhiim u ah maareynta maaliyadda iyo dhaqaalaha dalka waana joogaan dad Soomaaliyeed oo u qalma in ay madax ka noqdaan. Haddii aadan hureyn oo aad jeceshihiin ajnabiga, waxaad ka dhigan kartiin Lataliyayaal inta doorshada soo socota laga gaarayo.
← Previous Story Madaxweye Laftagareen oo kormeeray Cisbitaalka Magaaladda Baraawe.
Next Story → Kismaayo:Munaasabad lagu dhiirra galinayay Ardeyda ayaa lagu qabtay Macadka Imaamu Shaafici